देउवा सरकारका थुप्रै निर्णय पटक्कै चित्त बुझेका छैनन् : डा. शेखर — Newskoseli
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन परिणामपछि नेपाली कांग्रेस दुई ध्रुवमा विभाजित छ । एक पक्षले नेतृत्वको कमजोरीका कारण पार्टीले लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको आरोप लगाइरहेको छ भने अर्को पक्ष दुई ठूला शक्तिको गठबन्धनका कारण कांग्रेस पराजित भएको दाबी गर्छ ।
यसैबीच, युवानेताको एउटा पंक्ति पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनसम्मका नारा लगाउँदै हिँडेको छ । नेतृत्वको कटु आलोचकका रूपमा यतिबेला पाका केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला समेत देखिएका छन् । उनै कोइरालासँग पार्टी नेतृत्व, कांग्रेसको भावी योजना, समसामयिक राजनीतिलगायतका विषयमा गणेश लम्सालले गरेको कुराकानी शुक्रबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ । प्रस्तुत छ, सोही अन्तर्वार्ताको अंश–
कांग्रेस नेतृत्वको कामचलाउ हैसियतको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णय गर्दैछ, नैतिक रूपमा यो मिल्छ र ?
केन्द्रीय समितिमा देउवाजी आफैंले महासमितिको बैठक बोलाउने वचन दिनुभएको थियो । तर, अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेन नि ?
निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद पराजयपछि अन्तर्घातीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै तपाईंहरूले चर्को आवाज उठाउनुभएको थियो । अहिले तपाईंकै क्षेत्रका अन्तर्घातको आरोप लागेका केही केही नेता राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि चयन भइसकेका छन्, के अब कारबाहीलाई पुरस्कारमा बदल्नुभएको हो ?
हामीले पार्टीले किन हार्‍याैं भनेर समीक्षा गरेका छैनौं । समीक्षा गर्न बाँकी नै छ । महासमितिको बैठकमा त्यसको पनि समीक्षा हुन्छ । कारबाहीमा पर्नेहरू पुरस्कृत होइन, दण्डित नै हुनेछन् ।
हेर्नेस्, कांग्रेसलाई विधिअनुसार चलाउनुपर्छ भनेर हामीले पार्टी सभापतिको आलोचना सुरु गरेका हौं । र, मैले एकैचोटि राजीनामा माग्नु पनि विधिअनुसार हुँदैन र म राजीनामा माग्दिन पनि । हामी चाहन्छाैं पार्टीले विधिलाई फलो गरोस् । यसैले त महासमितिको बैठक बोलाउन प्रेसर गरिरहेका छौं । बैठकपछि अर्ली महाधिवेशन गरेर नयाँ लिडर छान्ने हो ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनाएर मैदानमा होमिएका एमाले–माओवादीको बहुमत आएको छ । सरकार पनि उनीहरूकै बन्ने निश्चितप्रायः छ । तर, कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको ‘ललिपप’ देखाएर सरकारमा सहभागी हुने कसरत गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । खास कुरा के हो ?
राजनीतिमा सम्भावना बन्द हुँदैन । सधैं खुला हुन्छ । तर, वर्तमानमा वाम गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । किनभने हामीले पाएको जनादेश प्रतिपक्षमा बस्नका लागि हो । यसैले जनादेशअनुसार वाम गठबन्धनको सरकार पहिलो प्राथमिकता हो ।
अहिले नेपालमा कामचलाउ सरकार छ, अर्को सरकार बन्न कम्तिमा तीन साता बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय विदेशमन्त्रीको भ्रमण कूटनीतिक प्रचलित मान्यताका हिसाबले मिल्दो देखिँदैन । यसलाई कांग्रेसले कसरी हेरेको छ ?
यही त आश्चर्यलाग्दो छ । यो भ्रमण समय सुहाउँदो र कूटनीतिक प्रक्रिया मिल्दो भएन भन्ने मलाई लाग्छ । हुन त वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, नयाँ सरकार बनिसकेको त छैन नि । यस्तो वेलामा विशेष दूतले कोसँग कुरा गर्ने ? संसारमा नयाँ सरकार बने पनि विशेष दूतको भ्रमण हुने गरेको छ । तर, हाम्रोमा चाहिँ बन्नुअगाडि नै भएको छ । यो किन र केका लागि भयो भन्ने कुराको चिरफार हुँदै जाला ।
कांग्रेसमा २१ जना कार्य सम्पादन समितिमा छौं । त्यहींबाट पदाधिकारीहरू बनाउने भन्ने थियो । यो नियम सभापतिले नै बनाउनुभएको हो । यसैले यो विधिअनुसार भएन, सोझै उल्लंघन नै भएको छ । २१ जनाभित्रैबाट प्रवक्ता नियुक्त गेरको भए वैधानिक हुने थियो ।
किनभने त्यो हतारको एकता थियो । अर्को एकताको भावलाई दुवै पार्टीले तलसम्म लान पनि सकेनौं । अर्कोतिर कांग्रेसमा जहिले पनि कचरपचर चलिरहन्छ, फुर्सद कसलाई हुन्छ र । मैले पनि त्योवेला चाहेजसरी ध्यान पुर्‍याउन सकिनँ, विजयजीले पनि सक्नुभएन । तर, अबचाहिँ म यसबारे चासो दिइरहेको छु । अरूले पनि दिनु जरुरी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न दियौं भने राष्ट्र टाट पल्टन्छ । किनभने हामी युएनको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अनुबन्ध भइसकेका छौं । देशमा आर्थिक, नैतिक संकट थपिन्छ । ‘मनी लन्डरिङ’ विश्वकै संस्था भइसकेको अवस्था छ । यसैले हामी धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । यसका आफ्नै नैतिक नीति र कानुन छन् । मलाई त अचम्म लाग्छ भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत चर्चित केपी ओलीजीले किन सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न एकपल्ट अवसर दिआैं भनेर बोल्नुभएको हो, उहाँले आफ्नो हैसियत ख्याल गर्नुपर्ने थियो ।